Tenga CDP choline poda (987-78-0) hplc≥98% | AASraw vatengesi
/ Products / Nootropics powder / CDP choline upfu
MUTSVENE unobatanidzwa uye unokwanisa kugadzira kubva pa gramu kusvika kuhuwandu hweCDP choline powder (987-78-0), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
CDP choline poda vhidhiyo
CDP choline poda hunhu hunhu
Molecular Kurema: 488.32
CDP choline poda mukuwedzera kwehuropi kushanda uye kuwedzera kwakawedzera
Mazita: CDP choline poda, citicholine, Neurocoline
CDP choline poda Kushandiswa
Ichi chiwedzerwa chakarongedzerwa kudzivirira kana kurapa kukanganisika kwendangariro kwakabatana nekukwegura nekuda kwekuti zvese zviri zviviri mamorekuru ayo anozvipikisa zvine neuroprotective uye zvinogona kuwedzera kudzidza. Kunyange ichiratidzika seinoshanda kupfuura phosphatidylcholine (PC) pachiitiko ichi, muchikamu nekuda kwekuwedzera PC synthesis muuropi, potency yayo yakati fananei neiyo yeAlpha-GPC.
CDP-choline ine zvimwe zvinoshandiswa kushandiswa zvine chekuita nekuziva. Inowanzoshandiswa seyeuchidzo yekuvandudza muhudiki, asi kunyangwe zvimwe zvakadzama ongororo dzichikurudzira kuti izvi zvinogoneka nemuromo CDP-choline, hapana zvidzidzo zvevanhu muhudiki panguva ino nenguva. Imwe ongororo yakacherekedza kuwedzera kwekutarisirwa ne low low CDP-choline (iyo inoda kudzokororwa), uye CDP-choline inogona kuve nemitezo seyakafanana nekupindwa muropa nharaunda kurwisa cocaine uye (yekutanga ufakazi inoratidza) chikafu futi.
Nekuti CDP choline inonyatsoshivirirwa, dhaidhi yakawandisa haina kunyorwa pasina kuoneka kwemhedzisiro. Musanganiswa wezuva nezuva wekuti chero kubva 250 kusvika ku 1000 mg, ingave mune dosi rimwe chete kana mumaviri maawa masere kusvika ku8 maawa akaparadzaniswa, unowanzoonekwa wakachengeteka uye unobudirira.
Sezvineiwo, ongororo yeMIT inoratidza kuti mhedzisiro iyo dhigidhi ye4000 mg yakanga isingaenzaniswi zvakasiyana neiya yemari ye2000 mg, zvinoita kunge ichiratidza kuti hapana kukosha kwakanyanya kutora dosi rakanyanya.
CDP choline inowanikwa mune zvese capsule uye poda fomu. Iyo inogadziriswa mvura, uye yakawanda se 95% yedhiramu yemuromo inotorwa nemuviri.
Yambiro paCDP choline poda
Miedzo yemakiriniki uye ongororo dzinoratidza kuti CDP choline haina zvinyorwa zvakakomba, kunyangwe pamwero wakakura kwazvo. Kuongororwa kweToological kwakaratidza kuti haina mhedzisiro yakakomba pane cholinergic system uye inoshivirirwa zvakakwana, maitiro ayo anoita kuti ive yakakodzera kurapwa kwezvirwere zvakasiyana-siyana, kushungurudzika uye kushushikana.
India kugaya, musoro, kushaya hope, uye manyoka zvave zvichitaurwa zvisingaite sezvinobvira mhedzisiro. Hapana zvidzidzo pamusoro pekuchinja kwevakadzi vane pamuviri zvakwana, saka avo vane pamuviri kana vanoyamwisa vanorayirwa kuti varege kushandisa CPD choline.
CDP choline ndeye yakawedzera yekuwedzera kune chero nootropic mushandisi yekuwedzera regimen. Payo pachayo, ndeye inotsigira ndangariro inosimudzira, inozivikanwa kuvandudza kuyeuka nekudzivirira kubva pakurasikirwa kwekufunga kwakanangana nekukwegura, kurwara uye kukuvara
Inopa yakawedzera simba repfungwa, zviri nani kutarisa, uye zvakajeka pfungwa. Mukubatana nemamwe ma nootropics ine simba potentiator, uye kana yakarongedzwa nemitambo yemitambo zvakanyanya zvinogadzira synergistic mhedzisiro inotora kukudziridza kuwedzeredzwa kune imwe nhanho iyo kunyange iyo yekuwedzera ingasvike pasina mumwe.
Kuongororwa pamwe nekuongororwa kwemakumi emakore, CDP choline yakaratidzirwa kuve yakanyatso tenderwa kunyange pakukwirira kwakanyanya, asi yakakura haina kudiwa kuwana mhedzisiro. Iko hakuna kunyorwa kwakakomba mhedzisiro uye inotenderwa kurapwa muEurope neJapan.
CDP choline chinhu chinodhura, chinowanika nyore chinowedzera icho chine chakasimba uye chiri kukura chinotevera pakati pevashandisi veNootropic. Kana iwe uchida kuwana zvakanyanya kubva kune yako nootropic stack, CDP choline ndiyo choline sosi yakakodzera kuedza.
(1) CDP choline poda inoshanda here?
CDP Choline iri hydrolyzed kupinda muCholine uye cytidine mumatumbo, mushure mekuyambuka Ropa-Brain Barrier iyo inochinjirwa kudzoserwa muCPP Choline panoshandiswa uye kunyudzwa kuburikidza neacetylcholine receptors iyo inokanganisika mukufunga uye nekuumbwa kwendangariro. Kubatsira kwekuchengetedza neuro kunokonzerwa neCDP Choline kunokonzeresa kuburikidza nekuchengetedza kweCardiolipin neSphingomyelin. Imwe nzira yakakurudzirwa yekuita ndeye kukurudziro ye glutathione synthesis. CDP Choline inobatsirawo kusimbisa kusaina kweazhinji masepteptors akadai seacetylcholine, norepinephrine, uye dopamine.
Pachine misiyano mizhinji kunyangwe iyo inofanirwa kutariswa nekuvandudza kugona kwekuziva. Nekuda kweizvozvo, zvakanyanyisa kufunga kuti vangashanda sei CDP Choline kune mumwe munhu. Izvo zvese zvinouya kuzasi kune zvavo zvavanoda uye zvazvazvino ekuziva kugona pamwe nemararamiro akasarudzika.
(2) BATSIRO NEMHAKA
CDP choline inesimba nootropic inowedzera iyo inokanganisa mamwe ma nootropics uye inoshanda yega yekuwedzera akawanda maitiro ekuziva uye hutano hwehuropi:
• Kuvandudza ndangariro: CDP Choline zvimwe inozivikanwa zvakanyanya nekukwanisa kwayo kuvandudza ndangariro nekudzivirira kurasikirwa nendangariro. Iyo inowanzobatanidzwa ne-anti-kukwegura uye yakadzidziswa seanogona kurapwa kwechirwere cheAlzheimer.
• Kuwedzera Simba Repfungwa: Kuchengeta huwandu hwepfungwa simba kwakakosha kune wese munhu, kubva kuvadzidzi vakatarisana nekubvunzwa kune vanhu vakuru vanotambura kubva pane wepfungwa kuderera-kwakawanda kunowanzobatana nekukwegura. Miedzo yemakiriniki yakaratidza kuti CDP Choline ine kukosha kwakasimba kwesimba repfungwa, ichiwedzera kumberi lobe bioenergetics uye kudzikamisa kusaziva kwakaderera kwakabatana nekukwegura.
• Zvirinani Kuisa Mhedzisiro uye Kutungamira: CDP choline inogona kuwedzera kugona kutarisisa kwenguva yakareba isina kudzikisira kushoma, chakakosha pakudzidza, kugona hunyanzvi hutsva, kana kupedzisa chero chinhu chakaomarara uye chepfungwa chinoda basa. Zvidzidzo zvinoratidza kuti izvi ichokwadi kunyangwe mamiriro ezvinhu akakomba anosanganisira kurohwa, kukuvara kwehuropi, uye chirwere cheAlzheimer's.
• Inogona uye Kuwedzera Dzimwe Nootropics: Vazhinji vashandisi veNootropic vanofunga CDP choline inofanira kunge ine-painenge ichivaka chero stack kana musanganiswa wezvinowedzera. Chinhu chakatanhamara choline sosi, inoshanda zvakanyanya zvakanaka neine racetam kirasi nootropics, ichiita kuti mhedzisiro yavo ive yakasimba uye panguva imwechete ichidzivirira musoro wechidiki uyo dzimwe nguva unobatanidzwa ne racetams. Iyo yakaratidzirwa kunonoka kutanga kwekuziva kwechirwere cheAlzheimer kana ichishandiswa pamwe chete nepiracetam.
CDP choline Yakasviba Poda
CDP choline Raw Poda Mapoka
CDP choline poda Kushambadzira
Ungatenga sei CDP choline poda kubva kuAASraw